Runta ka dambeysa barafka iyo da'da barafka | Saadaasha Shabakadda
Intii lagu jiray dhammaan malaayiin sano oo ka soo wareegtay markii Dhulka la aasaasay, waxaa jiray waqtiyo baraf da 'ah. Waxaa loogu yeeraa sida Da'da barafka. Kuwani waa xilliyo markii isbeddellada cimilada ay dhacaan oo hoos u dhigaya heerkulka adduunka. Waxay u sameeyaan hab ah in inta badan dhulka dushiisu barafoobaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in markaad ka hadleyso isbeddelka cimilada ay tahay inaad yeelato tixraac aad isku dhigto aragtida meeraheenna.
Ma rabtaa inaad ogaato hababka barafka iyo da'da barafka meeraheenna? Halkan waxaan ku muujineynaa wax walba.
1 Astaamaha da'da barafka
2 Da'da barafka la yaqaan
3 Da'da barafka ee ugu dambeysa
4 Sababaha glaciation
Astaamaha da'da barafka
Da’da barafka waxaa lagu qeexaa inay tahay waqti lagu gartaa joogitaanka joogtada ah ee daboolida barafka balaaran. Barafkani wuxuu gaadhayaa ugu yaraan mid ka mid ah ulaha. Dunida ayaa la ogyahay inay dhaaftay 90% waqtigeeda inta lagu gudajiray malaayiin sano ee lasoo dhaafay 1% ee heerkulka ugu qabow. Heerkulkan ayaa ugu hooseeya tan iyo 500 milyan ee sano ee la soo dhaafay. Si kale haddii loo dhigo, Dhulku wuxuu ku xanniban yahay xaalad aad u qabow. Muddadan waxaa loo yaqaan 'Quaternary Ice Age'.
Afarta sano ee barafka ugu dambeeya ayaa la qabtay 150 milyan oo sanadood ah. Sidaa darteed, saynisyahannadu waxay u maleynayaan inay sabab u yihiin isbeddelka meeraha Dunida ama isbeddelka ku yimaadda howlaha qorraxda. Seynisyahannada kale waxay doorbidaan sharraxaadda dhulka. Tusaale ahaan, muuqaalka da'da baraf wuxuu tilmaamayaa qaybinta qaaradaha ama uruurinta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Marka loo eego qeexitaanka glaciation, waa xilli lagu garto jiritaanka ubax baraf ah ee ulaha. Qaanuunkaas saddexda ah, hadda waxaan ku dhex jirnaa da'da barafka, maaddaama koofiyadaha cirifka ay ku dhow yihiin 10% dhammaan dusha sare ee dhulka.
Neefsashada ayaa loo fahmay inay tahay xilli baraf ah oo heer kulkiisu aad u hooseeyo adduunka. Xirmooyinka barafka, natiijo ahaan, waxay u fidsan yihiin dhinaca latitude hoose waxayna xukumaan qaaradaha. Koofiyadaha barafka waxaa laga helay meelaha fog ee dhulbaraha. Da'da barafka ee ugu dambeysay waxay dhacday qiyaastii 11 kun oo sano ka hor.
Da'da barafka la yaqaan
Waxaa jira qayb cilmi ah oo mas'uul ka ah barashada barafka. Waxay ku saabsan tahay glaciology. Waa midka mas'uulka ka ah barashada dhammaan muujinta dabiiciga ah ee biyaha xaalad adag. Biyaha oo ku jira xaalad adag waxay u jeedaan baraf, baraf, roobdhagaxyaale, baraf iyo qaabab kale.
Xilli kasta oo baraf baraf ah waxaa loo qaybiyaa laba daqiiqadood: glacial iyo is dhexgalka bulshada. Kuwii hore waa kuwa ay xaaladaha deegaanku aad u daran yihiin dhaxanna ay ka dhacdo meel kasta oo meeraha ah. Dhinaca kale, dhex dhexaadiyayaashu way iscelceliyaan, sida ay maanta yihiin.
Illaa iyo hadda, shan xilli oo da 'baraf ah ayaa la yaqaan oo la xaqiijiyay: Quaternary, Karoo, Andean-Saharan, Cryogenic iyo Huronian. Kuwaas oo dhami waxay dhacayeen ilaa wakhtigii Dhulka la aasaasay.
Da'da barafka waxaa lagu gartaa kaliya dhibcaha fiiqan ee heerkulka, laakiin sidoo kale kor u kac degdeg ah.
Muddada Quaternary waxay bilaabatay 2,58 milyan sano ka hor waxayna socotaa illaa maanta. Karoo, oo sidoo kale loo yaqaan 'Permo-Carboniferous period', wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu dheeraa, oo qaatay qiyaastii 100 milyan oo sano, intii u dhaxeysay 360 iyo 260 milyan oo sano ka hor.
Dhinaca kale, mudada glacial Andean-Saharan waxay kaliya qaadatay 30 milyan oo sano waxayna dhacday inta udhaxeysa 450 iyo 430 sano kahor. Muddadii ugu xumeyd ee ka dhacda meeraheenna waa shaki la'aan kan loo yaqaan 'cryogenic'. Waa da'da barafka ugu daran ee dhammaan taariikhda juqraafiyeed ee meeraha. Marxaladdan waxaa lagu qiyaasaa in barafka daboolay qaaradaha uu gaadhay dhulbaraha juquraafi ahaan.
Glaciation-ka Huronian wuxuu bilaabmay 2400 bilyan sano ka hor wuxuuna dhamaaday ku dhowaad 2100 ka hor.
Da'da barafka ee ugu dambeysa
Waxaan hadda ku jirnaa xilli dhex-dhexaad ah oo ku dhex-jira Quaternary glaciation. Bedka ay ku fadhiyaan koofiyadaha cirifku wuxuu gaadhayaa 10% dusha dhulka oo dhan. Caddayntu waxay noo sheegaysaa in muddadan quarternary, ay jireen dhowr da 'baraf.
Markay dadku tixraacaan "The Age Age" waxa loola jeedaa xilligii barafka ee ugu dambeeyay xilligan quarternary. Qeybta hoose ayaa bilaabatay 21000 sano kahor waxayna dhamaatay qiyaastii 11500 sano kahor. Waxay isku mar ka dhacday labada geesoodba. Ballaadhintii ugu ballaadhnayd ee barafka waxaa lagu gaadhay woqooyiga woqooyi. Yurub dhexdeeda, barafku wuu horumarey, wuxuuna daboolay dhamaan Ingiriiska, Jarmalka iyo Poland. Dhamaan Waqooyiga Ameerika waxaa lagu aasay baraf hoostiisa.
Qabow ka dib, heerka badda ayaa hoos u dhacay 120 mitir. Balaadhin ballaaran oo badda maanta ku taal berigaas. Xogtani waa mid ku habboon marka la baranayo isbeddelka hidda-socodka ee dadyow badan oo xayawaan iyo dhir ah. Intii ay ku guda jireen dhaqdhaqaaqooda guud ahaan dhulka xilligii barafka, waxay awoodeen inay isweydaarsadaan hiddo-wadayaasha una haajiraan qaaradaha kale.
Thanks to heerka hoose ee badda, waxaa suurtagal noqotay in lug lagu maro Siberia loona tago Alaska. Baaxadda weyn ee barafka waxay gaareen dhumuc dhan 3.500 ilaa 4.000 mitir, oo daboolaya saddex meelood meel dhulalka soo baxay.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa la xisaabiyay in haddii barafka haray uu dhalaaliyo, heerka badda uu kor u kici doono inta u dhexeysa 60 iyo 70 mitir.
Horumarka iyo dib u gurashada barafka waxay la xiriiraan qaboojinta Dhulka. Tan waxaa u sabab ah isbeddelada ku yimid halabuurka jawiga iyo isbeddelada wareegga Dunida ee Qorraxda. Waxa kale oo laga yaabaa inay sabab u tahay isbeddelka ku dhaca wareegga Qorraxda ee ku dhex jira xiddiggeena, Milky Way.
Kuwa u maleynaya in glaciations ay sababaan sababaha gudaha ee Dunida waxay aaminsan yihiin inay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic iyo saameynta ay ku leedahay xaaladda qaraabada iyo xaddiga badweynta iyo berriga dhulka dushiisa. Qaarkood waxay rumaysan yihiin inay ugu wacan tahay isbeddelka ku yimaadda dhaqdhaqaaqa qorraxda ama firfircoonida wareegga Dhul-Dayax.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira aragtiyo isku xira saameynta meteorites ama qarxinta fulkaanaha weyn iyo glaciation.
Sababaha ayaa had iyo jeer abuuraya muran, saynisyahannaduna waxay yiraahdaan waxaan ku dhownahay inaan soo afjarno xilligan is dhexgalka bulshada. Miyaad u maleyneysaa inuu jiri doono da 'cusub oo baraf ah dhowaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Barafka iyo da'da barafka
Waxaan kuugu hambalyeynayaa dadaalkaaga iyo ujeedooyinkaaga macluumaadka. Anigu waxaan ahay Dr ku takhasusay cilmiga maamulka waxaanan hayaa qaab saadaalin ah oo aan ku cabiro waaritaanka geedi socodka beeraha. Waxaan xiiseynayaa aqoontaada ku saabsan arinta glacial. Macluumaadkeyga waxaan idinkaga tegayaa farxad. Mahadsanid.
Jawaab Alejandro Olivares Ch